Omenala nke Argentina | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Argentina, omenala
Argentina ọ bụ n'ụzọ bụ isi a obodo ndi kwabatara, Ọ bụ ezie na ọdịdị mbara ala ya sara mbara nke na dabere na ebe ị gara, ị ga-enwe ike ịbanye na omenala ndị na-esiteghị na mbata na ọpụpụ Europe kama site na ndị amaala na ndị agbata obi Latin America.
N'ihi ya, Omenala ndị Argentina dị iche iche na ị ga-ahụ nke kachasị amasị gị gbasara gastronomy, mmekọrịta ma ọ bụ omume. Are na-aga Argentina? Ọ bụ oge dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye Europe n'ihi na mbelata nke peso adịla ukwuu na gọọmentị ikpeazụ a na mgbanwe a ga-amasị gị nke ọma.
1 Omenala gastronomic nke Argentine
2 Omenala ndi Argentine
Omenala gastronomic nke Argentine
Nri mbụ. Enwere ụfọdụ nri ndị Argentina na -ele anya dị ka akara ụghalaahịa ya, ọbụlagodi mgbe a na-eri ha na mba ndị ọzọ na mpaghara ahụ. Ana m ekwu maka asado, dulce de leche na empanadas.
Argentina abụrụla mba na-ebupụ ebugharị, na enweghị nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe abụrụla isi nsogbu maka mmepe, yabụ ehi, ọka wit na ugbu a soybean bụ ihe jupụtara na pampas ya bụ mmiri. Anụ ahụ na-atọ ụtọ, nke dị oke mma, kpọm kwem n’ihi ala ịta ahịhịa, ya mere enweghi onye Argentine nke na akwadoghi asado opekata mpe otu ugbo n’izu. Kpochapụwo bụ izu na ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi.
N'ebe a, beef nwere mkpirisi di iche iche na aha di iche iche dabere na ebe mba ahu di. Loin, warara nke anụ, buttock, rump, matambre. Achịcha Chorizo, choripan, achịcha na soseji ọbara, morcipán. Achuras enweghi ike ihapu na onu ogugu Argentine ma: sausaji, gizzard, akụrụ, soseji ọbara, chinchulines (eriri afọ). Ezigbo onye na-amịkpọ anụ ga-abụ ọkachamara karịa oge, anụ barbecue mgbe a na-egbu anụ, ihe ịma aka mgbe nsogbu, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma izute otu ị ga-eri nri kachasị mma nke ndụ gị.
Kedu ihe bụ anụ ukwuu so? Ọ dị mma, jiri salads ma ọ bụ ibe, nri nke ụbọchị, ihe oriri dị ụtọ (chimichurri na creole ihendori), ma were hepatoprotector wee laa maka ụra na nsị. A oriri maka okpo ọnụ!
Ọzọ nke gastronomic omenala bụ caramel, ihe ụtọ emere site na mmiri ara ehi na shuga nke gbara ọchịchịrị ma dịkwa ụtọ nke ukwuu. Ndị Argentinans hụrụ ya n'anya na enweghị swiiti ma ọ bụ achịcha dị iche iche na-enweghị dulce de leche.
na akwụkwọ ọnụahịaDịka ọmụmaatụ, ntụ ọka achicha mara mma nke achịcha na-eme ma na-ere site na otu ma ọ bụ iri na abuo, nwere ọtụtụ iche na dulce de leche na otu ihe ahụ bụ ice creams na sweets (eme ihe, candies, chọkọleti).
Kwere m, ọ bụrụ na ị nwaa ya, ị ga-ahụ ya n'anya, ị ga-achọkwa iburu ụfọdụ n'ime goodies ndị a na-ere na kiosks na nnukwu ụlọ ahịa niile. N'ikpeazụ, ike. Emere Empanadas n'ọtụtụ akụkụ nke Latin America, na ụdị ndị sitere na mgbago ugwu Argentina na-ewu ewu karịsịa ebe a. Ebe ugwu ahụ dị nso na Bolivia na Peru na ọ bụ ya mere efere ya ma ọ bụ ọbụna asụsụ ya nwere ọtụtụ akụkụ ndị ahụ.
E nwere ọtụtụ empanada kwa mpaghara mana ha sitere na anụ ma ọ bụ humita (ọka, ọka), butere ma obu ghere eghe. Ndị hụrụ Empanadas n'anya hụrụ ha n'anya n'ụlọ, na-eme mgwakota agwa ma jupụta n'ụlọ, mana na nnukwu obodo ọdịnala efuola ma taa ị nwere ike ịzụta ha n'ụlọ ahịa ọ bụla na-ere empanadas na pizzas.
Ọbụna Buenos Aires nke dị na ire nnukwu empanadas dị iche iche nke na-adịghị ahụ n'ime ime: ham na cheese, akwukwo nri, na anụ ezi na plums, na wiski, ọkụkọ na ọtụtụ etcetera.
N'ikpeazụ, n'ihe banyere ị drinkụ mmanya, ị gaghị eleghara ya anya nwunye. Ọ bụ infusion emere site na ahihia nke osisi akpọrọ yerba mate (a na-ebipu epupụta ala), a na-agbanye ya ma re ya. Emechaa, onye ọ bụla nọ na Argentine nwere onye ọlụlụ n'ụlọ (obere ma ọ bụ ibu ibu, nke ejiri osisi, iko, seramiiki ma ọ bụ gourd a mịrị amị, dịka ọmụmaatụ), na bọlbụ ọkụ iji zọọ infusion ahụ.
A na-etinye yerba n'ime, a na-agbakwunye mmiri ọkụ na-enweghị esi ya wee drunkụọ ya, ọkacha mma na ụlọ ọrụ ahụike n'ihi mmụọ nke di ma ọ bụ nwunye bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, a na-ekekọrịta ya.
Omenala ndi Argentine
Ndị Argentine na-emeghe nnọọ, ndị enyi na ndị na-emekọ ihe. Ọ bụrụ na ha masịrị gị, ha enweghị nsogbu na-akparịta ụka, na-akpọ gị ka ha bịa n'ụlọ ha ma soro gị pụọ. Buenos Aires bụ nnukwu obodo buru ibu nke nwere ụda karịa isi obodo ụwa, yabụ ndị mmadụ na-ahapụ Wenesde. Obodo nwere ọtụtụ ndụ abalị, ọtụtụ Ogwe na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ma ndị Argentine na-amasịkwa sinima na ihe nkiri a otutu na-eje ije n'okporo ámá ọbụna n'abalị.
N’ebe ndị ahụ, a na-ahụkarị ndị otu enyi na-ekwu okwu mgbe chi bọrọ, nọrọ ọdụ n’akụkụ ma ọ bụ n’ama. Obodo ndị dị n'ime ime obodo ahụ nwere ndụ mmekọrịta karịa Buenos Aires n'ihi na n'ọtụtụ n'ime ha, ọkachasị na mgbago mgbago ugwu, ụlọ oriri na ọ siụ soụ ahụ dị nsọ nke mere na a na-ebipụ oge ọrụ mgbe ehihie gachara.
Mgbe ahụ, dịka obodo ndị ahụ pere mpe ma onweghi onye bi n'ebe dị anya, ị nwere ike ịpụ kwa ụbọchị na echi enwere oge iji zuo ike.
Mgbe n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ọ na-esi ike ndị mmadụ ịdaba na mberede na ụlọ enyi ha ebe a ọ na-abụkarị ịga leta enyi gị n’enweghị ịdọ aka ná ntị. Ha na-akụ mgbịrịgba ahụ na voila. Onweghi onye kpasuru iwe, onweghi onye gha enyocha ihe a choro. Ọbụna, Nzukọ n'ụlọ bụ ihe a na-emeEnwere ike iri nri wee pụọ, ma eleghị anya maka ịmị anụ. Ndị enyi bụ mgbatị ezinụlọ. Otu ezinụlọ nke, n'aka nke ọzọ, na-akpachi anya na Argentine.
Dị ka ihe atụ, n’ụbọchị Sọnde, ezinụlọ na-ezukọkarị maka nri ehihie. Omenala bụ obodo nke ndị si mba ọzọ ma ọ bụ ezie na asado bụ nri a na-ahụkarị, yabụ pasta. Argentina natara nnukwu njem site na sotali, ya mere enwere ọtụtụ ụmụ anstali ha hụrụ pasta n'anya. Mgbe ọgbọ nke nones Omenala ịgbakọta n'akụkụ nnukwu efere nke ravioli ma ọ bụ noodles na ihendori fọrọ nke nta ka ọ kwụsị. Omenala ọzọ a na-akwanyere ùgwù bụ iri gnocchi ma ọ bụ gnocchi na 29 nke ọnwa.
Kedu ihe bụ omenala ndị Argentina? Asado, empanadas, dulce de leche (echefula ịnwale ice cream nke uto a), nwunye (ya na ahịhịa, ụtọ ma ọ bụ ilu, ọ bụ ezie na nke ọdịnala na-adị ilu mgbe niile), soro ndị enyi na-akparịta ụka, ọpụpụ ị drinkụ biya ma ọ bụ ebighi ebi kọfị okwu ebe onye Argentine nwere ike idozi ụwa site na ịgagharị n'etiti echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebe, n'ụzọ doro anya, Peronism nọ na mbara igwe mgbe niile, n'agbanyeghị onye masịrị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Argentina » Omenala Argentina
Kpoo gastronomy nke Portugal